Mobile | PTH
Home / Tech / Mobile
January 12, 2018	Mobile, Tech 0
“ကိုယ်ရဲ့ စူပါ ပါဝါက ဘာလဲဆိုတော့ ရိုက်လိုက်တိုင်း ပုံတွေ စွန်းလန်းနေတတ်တာပဲ။” “မသိဘူး. ရိုက်မယ်။” . သိပြီးပြီးလား။ အမိုက်စား HUAWEI nova 2i ကင်မရာနဲ့ ဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ ပုံတွေကို ဒီနေရာမှာ တင်ပြီး Group member တွေနဲ့လည်း မိတ်ဆွေဖွဲ့လို့ရတယ်ဆိုတာ … HUAWEI nova Series Fan Club Group ————————————————- (www.facebook.com/groups/187602021815844) မှာ လက်စွမ်းပြထားတဲ့ အဖိုင်းဆုံး ဓာတ်ပုံတွေကို တင်လို့ရတဲ့ အပြင် အခြား ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို လေ့လာနိုင်မဲ့ အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်လေ။ . . nova 2i မှ မဟုတ်ပါဘူး။ …
Samsung ကုမ္ပဏီမှ Galaxy Note 8 ကို လေယာဉ်စီးသူအားလုံးကို ဝေပေးခဲ့
November 5, 2017	Mobile 0
ကမ္ဘာကျော် မိုဘိုင်းဖုန်း ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Samsung မှ Galaxy Note 8 ကို လေယာဉ်စီးသူအားလုံးအား ဝေပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ Samsung ဟာ ယခင် ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Galaxy Note7တွင် ဘတ္တရီ ပြဿနာကြောင့် ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး လေယာဉ်ပေါ် ယူဆောင်ခွင့်ကိုလည်း ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါထုတ်တဲ့ Galaxy Note 8 ကတော့ ထိုကဲ့သို့ ပြဿနာ မရှိကြောင်းကို သက်သေပြတဲ့ အနေနဲ့ စပိန်လေယာဉ် တစ်စီးပေါ်မှာ ဝေမျှလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မြန်မာပြည်မှာပါ အဲဒီလို ဝေပေးခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည် ဈေးကွက်မှာ ပိုမိုယုံကြည်မှုကို …
October 17, 2017	Featured, Mobile 0
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အသက်အငယ်ဆုံး CEO နှစ်ယောက် ချာရာဘန် အသက် ၁၀ နှစ် ဆန်ဂျေကူမာရာ အသက် ၁၂ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းကတော့ ညီဖြစ်သူက ၆ တန်း အကိုဖြစ်သူက ၈ တန်းပါ။ ၎င်းတို့ ညီအကို နှစ်ယောက်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အသက်အငယ်ဆုံး CEO ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလောက် အသက်ငယ်ငယ် လေးနဲ့ CEO ဖြစ်သွားရတဲ့ အကြောင်းရင်း ကတော့ ဒီလိုပါ။ ညီအကိုနှစ်ယောက်ဟာ မိုဘိုင်းဖုန်း အတွက် Application ကို တီထွင် ဖန်းတီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူတို့ တီထွင်ဖန်တီး လိုက်တဲ့ Application ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ …
ရေဝင်သွားသော ဖုန်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်မယ်
October 1, 2017	Featured, Mobile 0
(၁) ဘတ္တရီကို ချက်ချင်းဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါ ဖုန်းကို ရေစိုလိုက်တာနဲ့ Power ပိတ်ဖို့ လုပ်မနေဘဲနဲ့ ဘတ္တရီကိုသာ ချက်ချင်း ဆွဲဖြုတ် လိုက်ပါ။ အဲလို ဘတ္တရီကို ဖြုတ်လိုက်ခြင်း အာဖြင့် သင့်ရဲ့ ရေစိုနေသော ဖုန်းကို ပြန်လည် ပြုပြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ iPhone ဆိုရင်တော့ power ကိုပဲ အမြန်ပိတ်လိုက်ပါ။ (၂) ဆင်းကဒ်ကို ဖြုတ်ပါ တကယ်၍ ဟန်းစက်ဟာ ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင် မှတ်သားထားသော contact information ကို မပျောက်ပျက်စေရန် ဆင်းကဒ်ကို ဖြုတ်၍ လေမှုတ်စက်ဖြင့် မူတ်လိုက်ပါ။ (၃) ရေမချောက်မခြင်း ဖုန်းကို မဖွင့်ပါနဲ့ ရေအစိုဓာတ်တွေ မကုန်ဘဲ ဖုန်းပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ဖုန်းကို …